Internationale Deutscholympiade 2020 - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ (၃)ရက်မှ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်အထိ၊ ဒရေစ်ဒန်မြို့။ - Goethe-Institut
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ (၃)ရက်မှ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်အထိ၊ ဒရေစ်ဒန်မြို့။
နိုင်ငံတကာ ဂျာမန်ဘာသာစကား အိုလမ်ပစ်ပြိုင်ပွဲသည် ဂျာမန်ဘာသာစကားအတွက် အကြီးဆုံး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ မှ ၇ ရက်နေ့ အထိ ​"DABEI SEIN! – Die IDO kommt zu dir" (ပါ​ဝင်လိုက်ပါ။ IDO သင့်ဆီ အရောက်လာပါပြီ။) ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာတွေ့ဆုံမှုများကို ဆန်းသစ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း ပုံစံဖြင့် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှ ကျောင်းသားပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သည် ယခုနှစ်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲတွင် ပါဝင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အကြိုပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှ အနိုင်ရရှိသူများသည် လယ်ဗယ်အဆင့် ၃ မျိုးလုံးတွင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဂျာမန်ဘာသာစကား လေ့လာသူများ ဆိုသော ဂုဏ်ပုဒ်အတွက် IDO တွင် ယှဉ်ပြိုင်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။
IDO ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ နိုင်ငံခြားမှ လူငယ်များ ဂျာမန်ဘာသာစကားအပေါ် စိတ်အားထက်သန်မှုရှိစေရန်၊ အချင်းချင်းကြားတွင် ဆင်ချင်တုံတရား ပိုမိုအားကောင်းစေရန် နှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များကြား ဂျာမန် ယဉ်ကျေးမှု၊ စီပွားရေး နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း တံခါးများကို ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲကို ၂၀၂၀၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ မှ ၇ ရက်နေ့ အထိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြင့် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ ဂျာမန်ဘာသာစကား အိုလမ်ပစ် ပြိုင်ပွဲသည် နိုင်ငံခြားမှ လူငယ်များကို ဂျာမန်ဘာသာစကား နှင့် အိုလမ်ပစ် အတွေးအခေါ်များ လှုံဆော်ပေးရုံသာမက ၄င်းတို့ အချင်းချင်းကြား ဆင်ချင်တုံတရားကို ပိုမိုအားကောင်းစေပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံကို ကမ္ဘာက ပိုမိုသိစေရန် တွန်းအားပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာတွင် ၂၀၂၀ နိုင်ငံတကာ ဂျာမန်ဘာသာစကား အိုလမ်ပစ် ပြိုင်ပွဲ အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပုံရိပ်များ၊ ဗီဒီယိုများ နှင့် အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို ဖော်ပြထားပါသည်။
Internationale Deutscholympiade ဆိုတာ ဘာလဲ။
Internationale Deutscholympiade က နိုင်ငံတကာမျိုးဆက်သစ်တွေကို ကူညီအားပေးဖို့နဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက လူငယ်တွေ ဂျာမန်ဘာသာစကားကို စိတ်ပါဝင်စားလာစေဖို့၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြား သည်းခံနိုင်စွမ်း ပိုမိုတိုးမြင့်လာစေဖို့နဲ့ ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ကို ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်သူလူငယ်တွေ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အလန်းတံခါးကို ဖွင့်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံက Goethe-Institut ရှိတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဆီမှာ နှစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို လှည့်လည်ကျင်းပပါတယ်။ IDO က လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ဒီမြို့တွေဆီ အလည်အပတ်ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ (၂၀၀၈)ခုနှစ်မှာ ဒရေစ်ဒန်မြို့၊ (၂၀၁၀)ပြည့်နှစ်မှာ ဟမ်းဘွတ်မြို့၊ (၂၀၁၂) ခုနှစ်နဲ့ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တို့မှာ ဖရန့်ခ်ဖွတ်မြို့၊ (၂၀၁၆)ခုနှစ်မှာ ဘာလင်မြို့၊ (၂၀၁၈)ခုနှစ်မှာ ဖရိုင်းဘွတ်မြို့တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Internationale Deutscholympiade ကို ဘယ်အချိန်ကျင်းပမှာလဲ။
နောက်ထပ် IDO ကို ဩဂုတ်လ (၃)ရက်ကနေ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်အထိ ကျင်းပပါမယ်။
နိုင်ငံပေါင်း (၅၀နိုင်ငံက ခန့်မှန်းခြေ လူငယ်အယောက် (၁၀၀) ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IDO ကျင်းပနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ဦးဆောင်ခေါ်လာမယ့် ဆရာ၊ ဆရာမ (တစ်နိုင်ငံလျှင် ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်ဦးသာ) အနေနဲ့ ဒရေစ်ဒန်မြို့က Goethe-Institut မှာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆီမီနာကို တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IDO မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတွင်းအဆင့် NDO သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတွင်းအဆင့် ရွေးချယ်ပွဲမှာ A2, B1 နဲ့ B2 အဆင့်ထဲက တစ်ဆင့်ဆင့်မှာ အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်သူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကို မလာရောက်မီ၊ အငယ်ဆုံး အသက် ၁၄ နှစ်နဲ့ အကြီးဆုံး အသက် ၁၇ နှစ် ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IDO မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုနိုင်သူများကတော့
ဂျာမန်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် ပြောဆိုတဲ့၊ မိဘနှစ်ပါးမှာ တစ်ပါးက ဂျာမန်ဘာသာစကားပြောတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ။
ဂျာမန်ဘာသာစကားပြောတဲ့နိုင်ငံမှာ တဆက်တည်း ခြောက်လအထက် ကြာရှည်နေထိုင်ဖူးသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ။
ကျောင်းသုံးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဘာသာစကားကို ဂျာမန်ဘာသာစကား အသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ဂျာမန်ကျောင်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ။
အသက်ပြည့်ပြီးသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ။
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ အချက်အလက်များကို မှားယွင်းဖြည့်သွင်းပါက အရည်အချင်းမပြည့်မီခြင်း၊ သို့မဟုတ် အနိုင်ရထားတဲ့ဆုကို ရုတ်သိမ်းခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံကို ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကျ ဒရေစ်ဒန်မြို့ကို လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးက ဘာသာစကားအဆင့်မတူဘဲ သို့မဟုတ် တူညီတဲ့ဘာသာစကားအဆင့်မှာ ရှိနေကြောင်း အရည်အချင်းစစ်ပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမလဲ။
နိုင်ငံရပ်ခြားက Goethe-Institut တွေမှာ ဘာသာစကားဌာနတွေက NDO အတွက် တာဝန်ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ဆရာ၊ ဆရာမများအသင်းနဲ့ အခြားသော သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
IDO မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဘယ်သူက တာဝန်ယူအကုန်အကျခံပါတယ်။
IDO မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် Goethe-Institut က ပညာတော်သင်ဆု အစီအစဉ်အဖြစ် တာဝန်ယူအကုန်အကျခံပါတယ်။
National German Olympics in Myanmar
Hein Htet Zan, Hlyan Htet Wai Yan and Sai Woon Mee are the winners of the National German Olympic Games in Myanmar. We congratulate them and wish them all the best and much success in learning German.